Yaa dawlad ahaa ka hor 1960.? | allsanaag
Yaa dawlad ahaa ka hor 1960.?
lixdankii ka hor Isaaq iyo Warsangeli yaa dawlad madax banaan ahaa?
Waxa la yaab le xeel-dheerida iyo garashada fog ee Ardaaga Odayaasha Warsangeli ee xilligaa. Maanta looyarada ama Qareemada joogaa sida ay
VII. This Treaty to come into operation from the 27th day of January, 1886
← Gobolka Sanaag Gaarhayuu u baahan yahay Ceebta Bosaso iyo Musuqmaasuqa Adeeggii Bulshada ee isku tashiga →